Kumenywa umphakathi emashini | News24
Kumenywa umphakathi emashini
KUMENYWA umphakathi ukuba uphume ngobuningi ukuzohlanganyela emashini yokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ezobe ibanjwe ePort Shepstone Mhlaka 24 March.
Umhleli wemashi uNkkz Engela Folley uthe lemashi izosuka eDip Spar ngehora lesikhombisa 7am kuyiwe emaphoyiseni asePort Shepstone nasenkantolo iPort Shepstone Magistrates Court, lapho kuzothulwa khona uhlu lwezikhalazo.
“Inhloso yemashi ukulwisana nokuhlukunyenzwa kwabesifazane nezingane, nokugqugquzela amaphoyisa nezinkantolo ukuba ziqinise isandla kulaba abanamacala okuhlukumeza,” kusho uFolley.
Uqhubeke wathi banethemba lokuthi lemashi izoletha ushintsho oluningi nasemiphakathini ukuze nalabo abahlukumezekile bakwazi ukuphumela obala babike emaphoyiseni, bangafeli ngaphakathi.
Okunye akuthintile ukuthi ezikhathini eziningi abesifazane nezingane bayahlukumezeka emakhaya, ezikoleni nanoma ikuphi, ngenxa yokusaba bagcine bengabikanga emaphoyiseni.
"Ngezinye izikhathi laba abahlukumezekile bayebafune nokubaleka, kepha bangazi ukuthi bangabalekelaphi. Ngalolosuku lemashi sizokwazi ukuthi sicobelelane ngolwazi siphinde sixoxisane ngzinyathelo umuntu angazithatha,” kusho uFolley. Unxuse nezihlangano ezisebenza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane ukuba nazo zibe inxenye.
Ukuthola ulwazi oluthe xaxa thintana noFolley ku-074 388 7542 noma ku engela.hughes@yahoo.com. Ungamthinta noNonto ku-071 830 7736.